शोणिपुर ठाउँ चन्द्रागिरिको पुरानो नाउँ - Vishwa News
भीमनारायण श्रेष्ठ / थानकोट, काठमाडौं
शोणितपुरको नाम लिनासाथ यो ठाउँ कहाँ पर्छ ? के छ त्यहाँ ? किन शोणितपुर भनेका हुन् ? भनि जानकारी पाउन कौतुहल्ता जाग्नु स्वाभाविकै हो । धेरैलाई शोणितपुरबारे थाहा नहुन सक्छ । शोणितपुर नै भएर उपत्यका जाने आउने गरी रहेको पत्तो नहुन सक्छ ।
काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गर्ने नाका (मार्ग) मध्येको पश्चिम नाकामा पर्ने चन्द्रागिरि नगरपालिका मुख्यत थानकोट नै शोणितपुर हो । द्वापरयुगका वीर पराक्रमी किराती राजा बाणासुरको राजधानी शोणितपुर । थानकोट अर्थात् शोणितपुर चन्द्रागिरि भञ्ज्याङ्गको उत्तरी भू–भागमा अवस्थित छ । थानकोटको भौगोलिक अवस्थिति २७०३९’५७” देखि २७०४२’०८” अक्षांश उत्तर र ८५०११’२९” देखि ८५०१४’०३” देशान्तर पूर्वमा पर्छ । यसको कूल क्षेत्रफल ७.९६१३५ वर्गकिलोमिटरमा फैलिएको छ ।
चन्द्रागिरिको काखमा अवस्थित नेवार समुदायको बाहुल्यता रहेको सुन्दर, स्वच्छ वातारण एवम् रमणीय शोणितपुर हाल थानकोट नामबाट चिनिन्छ । यो ठाउँलाई नेवारी भाषामा थक्वाः भनिन्छ । नेवार समुदायको बाहुल्यता रहेको यो ठाउँका वासिन्दा यहाँका आदिवासी हुन् । आफ्नो छुट्टै किसिमको ऐतिहासिक पहिचान बोकेको सुप्रसिद्ध गाउँ । हिन्दू धर्मावलम्वीको बाहुल्यता रहेको भए तापनि अन्य धर्महरु प्रति पनि सहिष्णुता अपनाउँछन् यहाँ वासिन्दा । त्यसैले आफ्नो धर्म, संस्कार, कला, संस्कृति र साँस्कृतिक पहिचानको धरोहरलाई उजागर गरी संरक्षण गर्न सफल भएका छन् । यहाँको ऐतिहासिक पक्षलाई अङ्गाल्दै जीवन्त राख्न र त्यसको अनुशरण गर्दै निरन्तरता दिंदै आएका छन् यहाँका वासिन्दा । यस गाउँको ऐतिहासक पक्ष खोतल्दै जाँदा पौराणिक कालमा सुप्रभानगरी नामबाट यो ठाउँ प्रख्यात भएको थियो ।
द्वापरयुगमा धर्मदत्त नामका राजाले पनि यहाँ राज्य गरेका थिए । उनको शासनकालको एक हजार वर्षपछि बालिका छोरा बाणासुरले राज्य गरेका थिए । बाणासुरले स्वर्णमय बनाई शोणितपुर नगरी नामाकरण गरी यस ठाउँलाई राजधानी बनाएका थिए । बाणासुरको राजधानी शोणितपुर हाल थानकोट नामबाट चिनिन्छ । अग्लो ठाउँमा रहेको बस्तीको साथै लिच्छवी काल र मल्ल कालिन क्वाथः (थक्वाःथ) अर्थात् कोतघर (तत्कालिन समयममा प्रशासनिक कामकाज हुने ठाउँ) अपभ्रंश भई थानकोट बनेको बुझिन्छ ।
बाणासुरको राजधानी शोणितपुर हालको थानकोट नै हो भन्ने थप पुष्टि गर्न बाणासुरले सैन्य अभ्यास गर्न हतियार (बाण) भण्डारण गर्ने र बाण हान्न बस्ने स्थान बाणस्थली हो । बाण हानेर पठाउने ठाउँ बाणभञ्ज्याङ्ग (हालसम्म पनि सो ठाउँहरुलाई बाणस्थली र बाणभञ्ज्याङ्ग अर्थात् बाडभञ्ज्याङ्ग) को नामबाट नै चिनिन्छ ।
थानकोट नै वाणासुरको राजधानी शोणितपुर हो भन्ने प्रष्ट पार्न राजा बाणासुरकी रुपवती सुपुत्री उषा र भगवान श्रीकृष्णका नाति अनिरुद्रको वैवाहिक सम्बन्धको पक्ष लिन सकिन्छ । राजकुमारी उषाले सपनामा देखेकी राजकुमारसँग विवाह गर्ने ईच्छा व्यक्त गरेकीले बाणासुरले चित्रलेखाको सहायताबाट श्रीकृष्णका नाति अनिरुद्रलाई राती सुती रहेको अवस्थाममा खाटसहित उठाई अपहरण गरी आफ्नो दरवारको कौशीमा ल्याई बन्दी बनाई राखेका थिए । त्यसरी राती निन्द्रामा रहेका अनिरुद्रलाई अपहरण गरी बाणासुरले लगेको कुरा भगवान श्रीकृष्णले थाहापाई दलबलसहित आई बाणासुरसँग युद्ध गरेका थिए । उक्त युद्धमा बाणासुरको घमण्ड तोडी आफ्ना नाति अनिरुद्रको बाणासुरका रुपवती राजकुमारी उषासित विवाह गरी दिएका थिए । शोणितपुरमा अनिरुद्रको बसाई रहेको बेला अनिरुद्र स्नान गर्न जाने खोला (गाउँको बीचबाट बगेको) को नाम भाजु ख्वाः सिलिईउ खुशी (ज्वाईंले स्नान गर्ने खोला) हाल अपभ्रंश भई हाल भाख्रवाःसि नामले चिनिन्छ । त्यस्तै गाउँको पश्चिम तिरको खोला आलः खुशी (अनिरुद्रको लागि ज्यूनार/भान्छा/खाना पकाउन पानी लिने खोला) हाल अपभ्रंश भई आलखु नामबाट चिनिन्छ । त्यस्तै गाउँको पूर्वतिरको खोलामा उषा महिनावारी हुँदा नुहाउने र महिनावारीको बखत लगाएको कपडा धुने खोला हिजा खुशी/मभिँ खुशी (फोहोर कपडा धुने र नुहाउने खोला) हाल अपभ्रंश भई उक्त खोला मँखु नामबाट चिनिन्छ । साथै अनिरुद्रलाई अपहरण गरी ल्याएर कौशीमा बिसाएकाले पहिले यहाँका बासिन्दाहरुले घर बनाउँदा कौशी राखी बनाउन नहुने कथन प्रचलनमा छ ।
इतिहासकारहरुको भनाई अनुसार बाणस्थलीमा बाणासुरको ठूलो दरबार हुनुपर्छ भनि अनुमान गरेका छन् । चन्द्रागिरिको फेद दैवज्वः भन्ने ठाउँमा बाणासुरको दरबार (गुफा) रहेको छ भन्ने गर्छन् । उक्त गुफा फर्पिङसम्म जान मिल्ने गरी बाणासुरले बनाएका थिए भनिन्छ । हाल थानकोट तर्फको गुफामा ढुङ्गा खानी सञ्चालन भई ढुङ्गा निकाल्न बारुद पड्काउने (ब्लाष्टिङ्ग) कार्य समेतले गर्दा भत्किई बन्द भएको अवस्थामा छ । यहाँका बासिन्दाहरुको भनाई अनुसार पहिला ती गुफा भित्र तीन चार तल्लासम्म जाने बाटो थियो । म स्वयम् पनि उक्त गुफा भित्र पहिलो कोठासम्म पुगेको छु । उक्त गुफाको कोठामा १५/२० जना मानिस अट्ने खालको थियो । हाल उक्त गुफा सबै भत्किसकेको अवस्थामा छ । साथै फर्पिङ तर्फको गुफा रहेको ठाउँको जग्गा त्यहाँका वासिन्दाहरुले तिब्बतीयनहरुलाई विक्री वितरण गरेकाले तिब्बतीयन गुम्बाको अधिनमा रहन गएको छ । बाणासुरको समयमा शोणितपुरको क्षेत्र शंखरापुर (साँखु) देखि फर्पिङसम्म फैलिएको थियो । अझ चित्लाङ्ग र केबलपुर पनि फैलिएको छ भनिन्छ ।
बाणासुरसँग युद्ध गर्न श्रीकृष्णंको साथ लागि आएका यदुवंशी ग्वालाहरु बाणासुर उपर विजय प्राप्त गरी कैयौं ग्वालाहरु भुक्तमानको नेतृन्वमा यहीं घरजम गरी बसेका थिए । नेपाल उपत्यका (वर्तमान काठमाडौं) विजय पश्चात टिष्टुङ्गलाई राजधानी बनाएर करिव आठ पुस्तसम्म शासन चलाएका थिए । यद्यपी ती ग्वालाका सन्तत्तीहरु हालसम्म पनि गोपाली (ग्वाः) थरबाट बसोबास गर्दै आइरहेको छन् ।
चन्द्रागिरिको फेद दैवज्वः भन्ने ठाउँमा बाणासुरको दरबार (गुफा) रहेको छ भन्ने गर्छन् । उक्त गुफा फर्पिङसम्म जान मिल्ने गरी बाणासुरले बनाएका थिए भनिन्छ । हाल थानकोट तर्फको गुफामा ढुङ्गा खानी सञ्चालन भई ढुङ्गा निकाल्न बारुद पड्काउने (ब्लाष्टिङ्ग) कार्य समेतले गर्दा भत्किई बन्द भएको अवस्थामा छ । यहाँका बासिन्दाहरुको भनाई अनुसार पहिला ती गुफा भित्र तीन चार तल्लासम्म जाने बाटो थियो । म स्वयम् पनि उक्त गुफा भित्र पहिलो कोठासम्म पुगेको छु ।
थानकोट नामबाट सुप्रसिद्धि पाएको यो ठाउँ सुप्रभानगरी हुँदै शोणितपुर रहन गएको र लामो काल खण्डपछि लिच्छवी कालमा थेन्जोग्राम नाम रहन गएको पाइन्छ । थेन्जोग्राम अपभ्रंश (थेञ्जो–थेञ्चो– थेन्को–थन्को–थान्को) भई थान्को र कोट्ट (किल्ला) शब्द अपभ्रंश भई कोट भएकाले सो समेत जोडिएकाले हाल थानकोट नाम रहन गएको पाइन्छ ।
लिच्छवीकालमा सामरिक र प्रशासनिक दृष्टिकोणबाट उपयुक्त मानिने कोतघर पनि यहाँ मौजुदा छ । यही कोतघरलाई नेवारभाषाबाट क्वाःथ भनिन्छ । गोपालवंशी राजाका सबैभन्दा अग्लो ठाउँमा रहेको दरबार (प्रशासनिक भवन) भएकाले नेवारभाषामा थक्वाःथ (थथ्याःगु क्वाःथ) भनिन्छ । यही थक्वाःथ अपभ्रंश हुन गई नेवार भाषाबाट थक्वाः हुन गएको हो । अति प्राचीन ऐतिहासिक सम्पदा भएको बाणासुरको राजधानी शोणितपुर हालको थानकोटको यो सानो आलेखमा सबै बर्णन गर्न सम्भव छैन । केही झलक मात्र दिन खोजिएको छ ।
• आदिनारायण मन्दिरसँगै बसन्तदेवको सम्वत् ४२८ को शिलालेख । यो नेपालको पहिलो राजाज्ञा अर्थात राजपत्र हो ।
• लण्ठ टोलस्थित (नासल पाटीनिर) भीमार्जुन–जिष्णु गुष्तको संयुक्त शासनको सम्वत ५७ को शिलालेख रहेको छ ।
• च्वछेँ टोलस्थित चालँपाटीमा भट्टारक महाराज गणदेवको वि.सं. ६१६ को अभिलेख रहेको छ ।
• महालक्ष्मी मन्दिर प्राङ्गणमा रहको संवत ८०४ को शिलालेख रहेको छ ।
• पुरातात्विक महत्वको सिद्धि विनायक मन्दिरको शिलालेख (यो शिलालेख अति प्राचीन हो । तर यसका लिपी टुक्रिएर गएकोले प्रष्ट बुझ्न कठिन छ ।
• ऐतिहासिक न्यायालयको रुपमा उभिएको झ्यालम्पाटी र त्यस अगाडिको तीनवटा ढुङ्गेधारा रहेका छन् ।
• यहाँ पुरातात्विक महत्वको महालक्ष्मी मन्दिर र बद्रीनाथ मन्दिर छ ।
चुनावी माहोल बनाउँदै अमेरिका भ्रमणमा आचार्य
पदक तालीकामा नेपाल दोस्रो, भारत तेब्बरले अगाडी
नेपाल र चीन हवाई सम्झौता, चीनका १५ विमानस्थल नेपाललाई खुला